RASMI: Antonio Conte Oo Laba Ciyaartoy Kasoo Bililiqaystay Kooxdiisii Hore Ee Juventus Iyo Xiddiga Ugu Qaalisan Tottenham Oo Amaah Kaga Tegay - GOOL24.NET
RASMI: Antonio Conte Oo Laba Ciyaartoy Kasoo Bililiqaystay Kooxdiisii Hore Ee Juventus Iyo Xiddiga Ugu Qaalisan Tottenham Oo Amaah Kaga Tegay
Kooxda kubdda cagta Tottenham ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay £20 milyan oo Gini ku iibsatay xiddiga Juventus ee Rodrigo Bentancur, hase yeeshee waxa iyagana ka tegay xiddigoodii ugu qaalisanaa ee khadka dhexe ee Ndombele oo dib ugu laabtay waddankiisa Faransiiska.
Tottenham ayaa warbaahinta usoo bandhigtay laacibka khadka dhexe ee Rodrigo Bentancur oo si rasmi ah ay uga soo iibsadeen Juventus, isla markaana qalinka ku duugay heshiis afar sannadood iyo badh ah.
Rodrigo Bentancur ayaa soo gabogabeeyey waayihiisa Juventus oo uu sannadkii 2017kii kaga soo biiray kooxda deriskeeda ah ee Turin, waxaana 133 kulan oo uu u saftay uu kula guuleystay saddex horyaal.
Tottenham waxa kale oo ay isla maanta kala soo wareegtay Juventus Dejan Kulusevski oo 21 jir ah, isla markaana amaah ugu ciyaari doona kooxda reer London 18ka bilood ee soo socda, laakiin waxay Spurs ku qasban tahay inay si rasmi ah u iibsatao marka uu dhamaado xilli ciyaareedku.
Dejan Kulusevski oo u dhashay waddanka Sweden ayay Tottenham ka bixin doontaa 29 milyan oo Gini marka uu xilli ciyaareedku dhamaado.
Dhinaca kale, waxay Tottenham amaahku dirtay xiddiga ugu qaalisan taariikhdeeda ee Tanguy Ndombele oo dib ugu laabtay kooxdiisii hore ee Lyon.
Kubbad-sameeyahan oo ay Tottenham kusoo iibsatay £54 milyan oo Gini ayaa la jaan-qaadi waayey qaab-ciyaareedka Spurs, waxaanay Lyon siin doontaa Tottenham lacag gaadhaysa £1.25 milyan oo Gini oo ah lacagta amaah ahaanta ay ugu qaadatay laacibkan.